Obbo Battee Urgeessaa fi Konkolaachisaa isaanii Obbo Wandasan Abdulqaadir irratti poolisiin yeroo qorannoo dabalataa gaafate. – Kichuu
Itti gaafatamaan Sabquunnamtii ABO Obbo Battee Urgeessaa fi konkolaachisaa waajjira dhaabaa Gullallee ta’uun kan tajaajilaa ture Obbo Wamdasan Abdulqaadir guyyaa kaleessaa yeroo duraatiif mana murtiitti dhihaachuu maatiin OMN-tti himan.
Bitootessa 23/2021 poolisiin mana murtii Magaalaa Buraayyuutti akka isaan dhiheessee ture maatiin yoo himan, dhaddacha kaleessaa irrattis poolisiin yeroo beellamaa dabalataa gaafachuusaa dubbatu.
Akka miseensi maatii Obbo Battee OMN dubbise kun himutti, beellama mana murtii guyyaa kaleessaa irratti poolisiin, sababa Obbo Batteefaa to’ataman yeroo mana murtiif ibsu, “Obbo Battee Urgeessaa hidhamtoonni waajjira poolisii Aanaa 3ffaa Buraayyuutti hidhamanii jiran akka jeequmsa kakaasaniif, akkasumas WBO waliin qindaa’uun hidhamtoonni kun akka mana hidhaatii ba’aniif gorsuuf garas dhufe jennee waan shakkineef to’annee” jechuun mana murtiif sababa hidhamuu isaanii himee jira.
Poolisiin yakka ittiin isaan shakke kana mana murtiif himus, himannoo isaatiif ragaafi galmee sichi qindeeffatu akka qabu himuun, yeroon beellama dabalataa akka isaaf kennamu gaafatee ture. Manni murtiichaas yeroo qorannoo dabalataa Poolisiin gaafate hayyamuudhaan, beellama dabalataa torbaan tokko boodatti, yeroo qorannoo guyyaa 9 poolisiif kennuun, Bitootessa 23/2013 tti qabatee jira.